Isitayela Sefa kanye Nezinkalo Zasogwini ku-Cosy Retreat - I-Airbnb
Isitayela Sefa kanye Nezinkalo Zasogwini ku-Cosy Retreat
Glenelg South, South Australia, i-Australia
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Vivienne
Thatha uhambo lwemizuzu engu-3 uye endleleni engaphambili ukuze ugijime ekuseni ngasogwini, bese unethezeka ngekhofi kuvulandi ogcwele izitshalo. Amapulangwe aphansi aphucuziwe kanye nophahla oluphezulu kugcina izinto zakudala, kuyilapho indlu yokugezela ye-monochrome ingeza umuzwa wesimanjemanje. Unendawo yokungena ehlukile futhi kuhlinzekwe isihlanzeko sesandla.
4.95 (izibuyekezo ezingu-198)
Indawo yokuhlala, nje uhambo lwemizuzu emi-3 ukusuka ogwini lolwandle. Ifulethi litholakala kalula lapho ungakhetha khona amakhofi ku-Broadway eseduze kanye nemizuzu eyi-7 ukusuka ku-Jetty Road ukuze uthole ezinye izinketho zokudla.
UVivienne Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Glenelg South namaphethelo